पिंजडा ब्याक अगेन: निखिल र साराको ‘कु कु कु…’ रिलिज | THE CINEMA TIMES
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – सिनेमा ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को पहिलो गीत सार्वजनिक छ । पछिल्लो समय लोक सिने संगीतमा अत्याधिक लोकप्रियता कमाएका राजनराज सिवाकोटीले संगीत भएको ‘कु कु कु…’ (यता पनि छैन उता पनि छैन) गीतमा अन्जु पन्त र संगीतकार स्वयम्को स्वर छ ।
लोक टुक्काहरुको समिश्रणमा तयार भएको गीत दर्शक तथा श्रोताले मन पराउने संगीतकारले आशा व्यक्त गरे । ‘मैले निर्माण गर्ने सबै गीतमा नेपाली लोक शब्दको बाहुल्यता रहन्छ । कति त प्राय मान्छेले नबुझ्ने शब्द पनि मैले गीतमा प्रयोग गरेको हुन्छु । किनकी, लोप हुँदै गएका नेपाली शब्दको बारेमा नेपाली दर्शक तथा श्रोतालाई जानकार गराउन मैले लोक शब्दलाई निरन्तरता दिईरहेको छु । मेरा गीतलाई मनोरंजनका लागी मात्र नभएर शब्दकोषको बारेमा पनि बुझिदिनु हुन् आग्रह गर्दछु ।’ राजनराजले प्रेसमिटमा भने ।
सार्वजनिक गीतमा निखिल उप्रेती र ‘रुद्र’ डेब्यु गर्ल साराले कम्मर मर्काएकी छन् । गीतमा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी र सौरव लामाको छायाँकन छ । मौनता श्रेष्ठले लेखेको सिनेमालाई द्वन्द निर्देशक हिमाल केसीले निर्देशन गरेका हुन् । सिनेमामा निखिल र साराका अलावा सुस्मिता केसी, पुकार भट्टराई, ज्याक श्रेष्ठ र कुशाग्रह भट्टराईको मुख्य भूमिका छ ।
माघ ४ गते प्रदर्शन आउने ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को निर्मातामा रोहित पुरी, गोविन्द गैरे, चन्द्रबहादुर क्षेत्री रहेका छन् । त्यस्तै सहनिर्मातामा रमेश सुवेदी/बाबुराजा सिंह र कार्यकारी निर्मातामा बसन्त शर्मा/शुशांत श्रेष्ठ छन् ।
Tags:Nikhil Upreti, saara
पिंजडा ब्याक अगेन: निखिल र साराको ‘कु कु कु…’ रिलिज0out of5based on0ratings.0user reviews.
Box office	Jan 21, 2018
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘पिंजडा ब्याक अगेन’ले दुई दिनमा औसत…